Vaovao - Torolàlana momba ny fividianana borosy Watercolor
Easels & fanaka
Asehoy ny vanja
Ankizy manao sary
Borosy sy fitaovana
Borosy borosy amin'ny antsipiriany
Borosy vita amin'ny rano
Travel borosy sy paosy
Mpanadio borosy sy mpanasa lamba
Mpihazona borosy sy mpikarakara
Palette Watercolor Ceramics
Taratasy fanaovana sary
Torolàlana momba ny fividianana borosy watercolor
Ny volo borosy no ampahany manandanja indrindra amin'ny penina hosodoko.
Ny volo vita amin'ny volo vita amin'ny rano dia mila fitehirizana rano sy elastika mahery, ary ny ambaratongan'ny fanangonana aloha dia tena zava-dehibe ihany koa.
Araka io fenitra io, ny filaharan'ny volo borosy manomboka amin'ny tsara ka hatramin'ny ratsy dia toy izao:
(miaraka amin'izay koa, ny vidiny dia avo ka hatramin'ny ambany)
Volo mink> volo squirrel> volo biby hafa (toy ny volon'ondry, volo amboadia, sns.)> Volo fibre artifisialy
Mizara roa matetika ho penina fandokoana, penina misy tsipika ary penina ao ambadika (avy amiko irery ireo anarana ireo, araka ny tondroin'ny anarana).
Izany hoe, ny penina ampiasaina amin'ny fandokoana dia matetika ampiasaina amin'ny doko.
Ary matetika dia mila ampiasaina miaraka amin'ny fotoana iray izy io. Ireo vao manomboka dia afaka mividy telo eo ho eo aloha.
Izany hoe, ny penina dia nitaona tsipika manify.
Amin'ny ankapobeny, ny fananana iray dia ampy, izay mitaky fahaizana mivory eo anoloana.
Aza adino ny tsy mividy penina manify tena kely toa volo vitsivitsy fotsiny. Ho diso hevitra ireo vao manomboka fa ho mora ny mifehy. Raha ny marina dia tena mahantra ny fitahirizana rano. Tsy misy rano alohan'ny hisarihana ny antsasaky ny tsipika.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny fananana kibon'ny penina hitehirizana rano. Mandritra izany fotoana izany dia maranitra be ny tendron'ny penina. Penina manao sary tsipika toy izany no tsara indrindra.
Izany hoe, ny penina dia nanintona ny fandokoana halo tamin'ny faritra lehibe niaviany.
Ho an'ireo izay manana tahiry fitehirizana rano matanjaka sy habe lehibe, ireo vao manomboka dia afaka mividy iray voalohany.
Izany hoe, ny penina azonao esorina rehefa mandeha ianao dia tsy ilaina.
Ity dia momba ny penina loharano. Ity karazana penina ity dia misy ampahany fitahirizana rano amin'ny borikiny. rehefa ampiasaina dia afaka mamoaka ny rano izy, ka tsy ilaina ny manamboatra rano vera hafa.
Rehefa mividy penina dia ho saro-takarina ny isa, fa ny tena haben'ny isan'ny marika sy andian-tsarimihetsika mifanentana dia samy hafa, ka ny tena habeny dia hanjaka rehefa mividy.
Amin'ny ankapobeny, raha manao sary 16K ianao, ny halavan'ny tendron'ny borosy ampiasain'ny penina ambony dia mety ho 1,5 ka hatramin'ny 2.0cm; Ny penina afara dia mety ho lehibe kokoa, manomboka amin'ny 2.0 ka hatramin'ny 2.5cm.
Ny loha penina mahazatra indrindra dia mizara ho loha boribory sy loha efa-joro.
Raha manao sary isika, dia afaka mampiasa loha boribory, izay endrika mety sy be mpampiasa indrindra;
Fangtou dia ampiasaina amin'ny toerana misy loko rano.
Ho fanampin'izay, misy endrika hafahafa, izay zara raha ampiasaina, ka tsy averiko intsony
1. Aorian'ny hosodoko, sasao sy ho maina amin'ny fotoana mety ny penina. Aza adino ny tsy handemana ny penina anaty rano mandritra ny fotoana lava, raha tsy izany dia mety hianjera ny lohan'ny penina ary mety vaky ny mpihazona penina
2. Ny penina novidinao dia mety misy fonony hiarovana ny lohan'ny penina, fa rehefa azonao izany dia azo ariana ny fonony. Aza saronana indray ny fonony aorian'ny fandokoana fa manimba ny volo borosy.
Efitra 503, gorodona 5, tranobe 4, Kianja iraisam-pirenena Hanwei, Distrikan'i Fengtai, Beijing, Sina
Fomba fisafidianana sy fitandremana an'i Easel
Meeden vao haingana no namoaka fonosana vaovao
Lisitry ny tolo-kevitra momba ny tranokala ARTNEWS
Momba ny Meeden Art Supply